Xogta SIYAASIYIINTA ugu hantida badan caalamka iyo xadigga hantidooda – Madal Furan
Hoy > Warka > Xogta SIYAASIYIINTA ugu hantida badan caalamka iyo xadigga hantidooda
Xogta SIYAASIYIINTA ugu hantida badan caalamka iyo xadigga hantidooda
Hordhac: Hore waxaan idiinkusoo bandhigay Siyaasiyiintii ugu caansanaa ee naftooda ku waayey siyaasadihii ay ku jireen dartood, kuwaas oo shirqoolo qarsoodi ah lugu laayey. Qaybtan maanta waxaan idiinkusoo bandhigayaa 10ka Madaxweyne ee ugu hantida badan madaxda caalamka, iyadoo boqorada wadamada carabtu ay kaalmaha sar sare uga jiraan liiskan.
Vladimir Putin (Ruushka) – $40 billion
Madaxweynaha hada talada dalka Ruushka haya, Vladimir Putin ayaa kaalinta koowaad ka galay tobanka madaxweyne ee ugu hantida badan madaxweynayaasha caalamka. Hantida madaxweyne Putin ayaa lugu qiyaasay in ay kor u dhaaftay 40 bilyan oo doolar ($40 billion dollar), doorashadii 2007 ee uu ku guulaystay Putin waxa uu wakhtigaas sheegay in hantidiisu aad u yartay isagoo sheegay keliya in uu haysto hanti dhan 150 kun oo doolar (150,000 dollar), sidoo kale waxa uu hadda leeyahay 11 meelaha lugu raaxaysto, inkastoo warbixin aan la cadeyn ay sheegayso in hantida Putin dhantahay 70 bilyan oo doolar, warbixinta ayaa tiradda ku dartay shirkado waaweyn oo ka shaqeeya gudaha dalka Ruushka, shirkadahaas oo kamid yihiin “Shirkada ugu weyn dhanka saliidaha ee Surgutneftegaz, iyo shirkada kootada ku haysata gaasta dabiiciga ah ee Gazprom”, si kastaba ha ahaatee ilaa hadda waxa la isku waafaqsan yahay hanti dhan 40 bilyan in haysto madaxweyne Putin.
3. Hassanal Bolkiah,(Suldaanka M/Goboleedka Brunei) – $20 billion
Brunei waa maamul goboleed iskii isku maamula oo kuyaal waqooyiga Island, isma laha sida uu dhulkeedu u yaryahay iyo sida Suldaanka maamulaa u qanisanyahay, Suldaan Haji Hassanal Bolkiah ayaa gacantisa waxa ku jira hanta dhan 20 bilyan oo doolar iyo in badan uu si hoose gacanta ula jiro.
Waxaa kamid ah hantida uu leeyahay Suldaan Haji Hassanal mid kamid ah shirkadaha ugu waaweyn uguna qaalisan ee baabuurta, baabuurtaas ayaa ah kuwo qaalli ah oo ku kooban aduunka, waxa uu furay laba dumar ah inkasta oo uu hantidiisii ku qoray xaaskiisii ugu horeeyey, qoyskiisu waxa uu ka koobanyahay 7 hablood iyo 5 wiil oo uu dhalay iyo 10 caruur ah oo ay caruurtiisu sii dhashay.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Madaxweynaha Imaaraadka – $15 billion
Madaxweyne ku xigeenka dalka Isku taga Imaaraadka Carabta ayaa la ogyahay in uu yahay hantiile, laakiin hadda waxaa la ogaaday in madaxweynaha Imaaraadku yahay kan ugu hantida badan dalkaasi, hantida Madaxweyne Khalifa Bin Zayed Al Nahyan ayaa lugu qiyaasay 15 bilyan oo doolar. Boqor Khalifa ayaa xilka Imaraadka qabtay kadib markii aabihii geeriyooday 3-dii Novermber 2004, Zayed Al Nahyan oo ilaa 1994-kii ahaa boqorka dalkaas, hadaba Khalifa ayaa leh Shirkad maalgashi oo Abu-dhabi ka shaqaysa, halka inta kale qoyskiisuna ay leeyihiin hanta dhan 150 bilyan oo doolar isku dar idilkoodba.
Hamad Bin Khalifa II (Amiirkii hore ee Qatar) – $2.5 Bilyan
Tani waa ta ka dhigtay in dalka Qatar uu kamid noqodo wadamada ugu qanisan caalamka oo dhan, waxaana tusaale u ah Amiirkii hore ee dalkaas oo lugu qiyaasay hantidiisa 2.5 bilyan oo doolar, Amiir Hamad Bin Khalifa ayaa xukumaayey Qatar 1995-kii ila 2013, kadib markii uu dhaxlay aabihii oo geeriyooday, isla markaana waxa uu kasoo jeedaa qoys ku abtirsada madaxtinimadda.
Somaliland iyo Puntland oo weji siyaasadeed u isticmaalaya dagaalka Tukaraq
DAAWO:- Amin arts oo heestii barbar dusha ka saaray xaaladda Itoobiya
DAAWO:- Su’aalihii Baarlamaanka Somaliland weydiiyeen Wasiirka Arr. Dibadda iyo Jawaabihgii uu ka bixiyey